Ntoni na omnye ukunyusa imfuneko ngexesha ukuboleka imali
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ntoni na omnye ukunyusa imfuneko ngexesha ukuboleka imali
Kwiminyaka yakutshanje oomatshini contract yaqonda waba Mitsukareru jikelele kule dolophu, kwimemori esisikhupheli sokuxhaphakileyo isicelo kufuneka babe nako ngokulula kunangaphambili.
ngaphandle lonke ixesha kuyimfuneko ukwenza inkqubo kwi counter, umbuzo kwaye uphendule iseshoni ye-adyumenti umyalelo kwemizuzu embalwa aye elikhankanyiweyo, ngenxa yokuba uya kuhlola azixhalabise ezibolekisa. Oko Wathi
, ngokuba abantu ucinga uzama ukusebenzisa okwesihlandlo sokuqala yaqonda oomatshini contract, kufuneka ukuba uhlobo amaxwebhu, ungaphinda ube uhlobo ukuxakeka Andazi nokuba uviwo oluqhutywa le nkqubo.
ke eli xesha, siza kwazisa oko kufuneka ngexesha lesicelo imali ukulondoloza.
Ukuba nemali esisikhupheli sokuxhaphakileyo yabathengi, njl, owokuqala efunekayo amaxwebhu lokuzazisa.
Uxwebhu yokuchonga, libhekisela
? umhla wokuzalwa
ochazwe ngokuthembekileyo sekhadi esemthethweni, nguye lowo jikelele, ilayisenisi yokuqhuba okanye ipasipoti, njl kuya kuba ngathi.
ngexesha nasiphi na isicelo, kufuneka lowo unako ukuqinisekisa ngokuthembeka ukuba akukho impazamo ulwazi.
Ukongeza, amaxwebhu yesazisi akulindelekanga ukuba angenise yokuqala, esisiseko wokuprinta ezingeniswe ikopi emnyama namhlophe ezinjalo. Xa mvume
umqhubi ngokufuthi ezisetyenziswa ngayo, nceda qaphela ukuba kufuneka ikopi omabini kwimeko yalo.
ukuya kwenye, yintoni ingasetyenziswa njengamaxwebhu yokuchonga, zokundwendwela kunye like.
akakho, kwaye sele liphelile, ngenxa yokuba kukho amathuba kuthathwa i amaxwebhu yokuchonga ongasebenziyo, ukuqiniswa elimisiweyo Makhe Ungalibali.
Yintoni efunekayo kwezinye iimeko
In uninzi lwemali nkonzo, sisebenzisa esisikhupheli sokuxhaphakileyo xa kukho amaxwebhu yesazisi kunye ngetywina.
, kunjalo, yaye ukuba umboleki yenkampani eboleka ukuba inani elikhulu, kwimeko ukulondoloza itotali idlula isixa esithile, inawo na ubuncinane efunekayo ukuze ukwahlula ubungqina yengeniso.
ubudlelwane isiqinisekiso yengeniso, kuba imali ebolekiweyo, nguye izinto kuba omnye ukukwazi lokuhlawula abancede uzimisele.
kuwa ikakhulu neepheyisliphu kunye isiliphu khomiwa, kwi umvuzo zemigaqo, ukuze angqine ukuba ingeniso ezinzileyo, ungacelwa ukuba zingenise kunye, ezifana kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo.
kwimemori esisikhupheli sokuxhaphakileyo ezithile abanezakhono kwimizobo, kuba shintsha elibukhali nditsho ezifana isiqinisekiso ingeniso kunye nesaziso yerhafu, uya kwenza imvumelwano kwamagingxi ukuphakuzela uze ugcine zicinezelwa kananjalo ukuba indlela isivumelwano Imisebenzi yaphambi kunye nabanezakhono kwimizobo.
kwimeko labantu abasebenzayo nje kuphela ongumnikazi okanye incula simahla, ingeniso ubungqina iya kuba ingxelo isigqibo. Kuba xa wena ukusilela wathi
kunyaka odlulileyo, akukho ngaphantsi kwimeko yokuba ukuboleka kuba nzima.
Isizathu soku kukuba ukuchaza nomda semali esisikhupheli sokuxhaphakileyo, abo ummiselo mali iyonke.
ngulo mthetho, eboleka ngaphezu kwesinye kwisithathu sengeniso yonyaka kuye indlela ukuba awukwazi ukwenziwa, mna ingeniso uba okuba njengoko zoviwo nozinzo ingeyiyo uzimele ulondoloza.
Ukuba kuboleka ngaphezu
kuthelekiswa ukuboleka eziqhelekileyo, xa ungena ukulondoloza ngakumbi, kukho indlela yokuba isicelo semali-mboleko leyo olubekwe yi izindlu.
ikhaya okanye i-ofisi, into leyo ingasetyenziswa xa kukho nezinye ilizwe. Isixa mali ingaba lokuboleka
kwakhona, ngokumalunga njengokulinganisela kwakho, izindlu ziya kuba nako ukusebenzisa malunga-50% kwi-70%. mboleko
collateralized yi izindlu ezithengiswayo, ukongeza kumaxwebhu yesazisi-mntu kunye nesatifikethi yengeniso, kufuneka amaxwebhu ukuqatshelwa kweyona estate, ezifana isatifikethi izinto ezibhalisiweyo.
Ngaphandle koku, sivumelwano okanye afunekayo xa usenza isicelo akananto, masenze qaphela ukuba kuyimfuneko ukuba ilungele ifomu yesicelo.
esisikhupheli sokuxhaphakileyo, uboleke imali sakho Kufuneka ube amaxwebhu ulwazi abantu babone.
njengamaxwebhu bamaxwebhu koko, yenza ukungeniswa yokuchonga ungabona idilesi kunye nomhla wokuzalwa.
ukuba bangenise naziphi na ikopi, yoshicilelo inxalenye Masibhale ingqalelo ngoxa zilungiselelwe ukuze ube mncane.
Xa uboleke imali ngakumbi, xa kwimeko ezininzi ukulondoloza, kubalulekile ukuba ushiye ukulungiselela amaxwebhu ukungqina le mali yenzuzo. Kwimeko yabantu abenza ishishini ngabanye
, irhafu ubuyele uyayazi nyaka-mali ophelileyo yentengiso kunye nenzuzo kuya kufuneka nesatifikethi ingeniso.
kukho ingeniso ngcembe, masenze isicelo njengobungqina ukukwazi ukuhlawula.
Ukongeza, ezemali lwabathengi, kwimeko ukuba ufuna ukubeka qasha mali ezihambelanayo, kucetyiswa ukuba enze esisikhupheli sokuxhaphakileyo in ngummeli wowona real estate.
wabeka isakhiwo besibini, ezifana ofisi okanye ikhaya, ukuboleka kunokwenzeka okanye nokuba okanye hayi ngokwemiqathango yokubala ixabiso real estate kwenziwa. Amaxwebhu ukuba zingeniswe
abaninzi, de kuphele uviwo lugqitywe kubalulekile ukuba lunganako ixesha.